कैलालीका कोरोना संक्रमित युवक निको भएर घर फर्किए — Imandarmedia.com
१भारत र चीनका विदेश मन्त्रीबीच ७५ मिनेट फोन-वार्ता
२१३ वर्षीया बालिका बलात्कर गरेको आरोपमा एक युवकलाई १८ वर्ष कैदको फैसला
३काठमाडाैंमा फेरि बर्डफ्लु देखियाे, कुखुरा र दाना नष्ट
४मलेसियामा कोरोना विरुद्धको पहिलाे भ्याक्सिन शुरू
५ओली-प्रचण्डसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने नगर्नेबारे कांग्रेसले गर्यो यस्तो निर्णय
६दक्षिण कोरियाले देशव्यापी कोरोना खोप सञ्चालन गर्दा नेपाली खुशी
७हात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
८प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता
९गृहले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई किन जारी गर्यो यस्तो सर्कुलर
१०दक्षिणकालीमा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
११भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरको सङ्केत : ४ राज्यमा एक हप्तादेखि निको हुनेभन्दा नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या बढी
१२देउवाले बोलाए कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक
७नेपालमा फेरि न्युन चापीय प्रणालीको असर देखिएपछि मौसम सम्बन्धि भर्खरै आयो यस्तो जानकारी
८तिन दिनसम्म मौसममा हुँदैछ यस्तो बदली, बुधबारदेखि फेरि वर्षा र हिमपातको सम्भावना
९भागरथीको मोबाइलमा रहेका मेसेज, भिडियो, अडियो र कल विवरणबारे खुल्याे नयां रहस्य, प्रहरी समेत चकित
११म्यानमारको सेनाविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बाइडनको चेतावनी, अब के होला ?
कैलालीका कोरोना संक्रमित युवक निको भएर घर फर्किए
कैलाली । केहि दिन अघि भारतीय मिडियाहरूले नेपालमाथी ठुलाे आरोप लगाए । उक्त आरोप थियो नेपालीने भारतमा कोरोना फैलाउने षड्यन्त्र गरे तर उक्त भ्रामक समाचार फ़ैलाइएको ४ घण्टा नबित्दै उल्टै नेपालमा भारतबाट आएका भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । अहिले भारतमा काेराेनबाट ५ सय बढीकाे मृत्यु भइसकेकाे छ।
तर नेपालमा भने भेटिएका कोरोना संक्रमित पनि निको भएर घर फर्किने क्रम जारी छ । शनिबार मात्रै २ जना कोरोना संक्रमित नेपाली निको भएर घर फर्किएकाे १ दिन नवित्दै थप एकजना काेराेना संक्रमित निकाे भएर घर फर्किएका छन् । यसलाई नेपालीहरुले चमत्कारको रुपमा लिएका छन् । कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन र कोरोना संक्रमित नेपाली पनि निको भएर घर फर्किन थालेपछि भारत छक्क परेको छ ।
धनगढीको सेती अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित युवक निको भएका छन् । उनलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरेको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–९ प्रतापपुरका २१ वर्षीय युवकको दोस्रो र तेस्रो पटक गरिएको कोरोना संक्रमण परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको थियो ।
पहिलो रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि अस्पताल भर्ना भएका उनको दोस्रो र तेस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गर्ने तयारी भइरहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रवक्ता डा. जगदीश जोशीले जानकारी दिए । चैत २२ गते परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएका उनको शनिबार नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो ।
त्यसको २४ घण्टामा अर्को परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरेको डा. जोशीले बताए । ‘उहाँको दुईपटक नै कोरोना नेगेटिभ आयो’ उनले भने ‘२४ घण्टामा परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखिएपछि आजै डिस्चार्ज गर्ने तयारीमा छौँ’ घर फर्किएपछि पनि एक हप्ता सामाजिक दुरी कायम गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।
भारतबाट चैत ११ गते घर फर्किएका उनलाई कैलालीको प्रतापपुर क्वारेन्टाइनमा ११ दिन बसेपछि कोरोना पुष्टि भएको थियो । नगरपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा उनी १३ गते देखि बसेका थिए । ११ दिन क्वारेन्टाइनमा र १३ दिन आइसोलेसन बसेका उनी आइतबार नै घर फर्किने अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि नेपालको छैटाैँ तथा जिल्लाको दोस्रो कोरोना संक्रमित बाग्लुङ नगरपालिका– ३ गैँडाकोटकी ६५ वर्षीया महिलाको चौथोपटकको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएपछि अस्पतालबाट शनिबार डिस्चार्ज गरिएकाे छ । चौथो टेस्टको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय बाग्लुङका प्रमुख सुरज गुरौले जानकारी दिए ।
पहिलो र दोस्रो स्वाब परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको उनको शुक्रबार तेस्रोपटकको स्वाब रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । त्यसको २४ घन्टामा पुनः स्वाब निकालेर चौथोपटक परीक्षणका लागि पोखरा पठाइएको थियो । तेस्रो र चौथो दुवैपटकको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गरेकाे हाे ।
गत ४ चैतमा बेल्जियमबाट कतार हुँदै बाग्लुङ आएकी उनलाई १७ चैतमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि धौलागिरि अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको थियो । दम र उच्च रक्तचापको समस्या भए पनि उनले उच्च मनोबलका कारण कोरोनालाई सजिलै जितेकाे धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र बी. पोखरेलले जानकारी दिए ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिए पनि ती महिलालाई केही समय घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिने पनि पोखरेलले बताए । उनीसँगै बेल्जियमबाट नेपाल आएकी बाग्लुङकै पहिलो संक्रमित तथा नेपालको पाँचौँ संक्रमित १९ वर्षीया किशोरीको भने चौथो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको छ ।
यसअघि आज दिउँसाे शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा २७ दिनसम्म उपचार गराएर पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएर प्रसिद्धि श्रेष्ठ पनि डिस्चार्ज भएकी थिइन् । नेपालमा हालसम्म ३१ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । जसमध्ये हालसम्म तीन जना उपचारबाट निको भई घर फर्किएका छन् ।